Taalo Dad badan ka yaabisay oo laga dhisay magaalada Almaty !!(Daawo Sawirro) – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaTaalo Dad badan ka yaabisay oo laga dhisay magaalada Almaty !!(Daawo Sawirro)
Magaalada Almaty ee caasimada dalka Kazakhsatan waxaa laga dhisay Taalo loo ekeesiyay Xayawaanka loo yaqaan Dabagaalaha, waxaana taaladan ay noqotay mid dad badan aad ula yaabeen si weyna loo hadal hayo.
Dadka kunool magaalada Almaty ayaa kusoo toosay iyada oo magaalada dhaxdeeda laga dhisay taalo Dabagaale oo dheereerkeedu gaaraya 12 miitar, waxaana taaladan laga sameeyay alwaax sida ay sheegeen Injineeradii sameysay.
Taaladan Dabagaale ee laga dhisay Caasimada dalka Kazakhsatan ayaa qeyb ka ah mashruucyada dowladda hoose ay ku horumarinayso bilicda caasimadda, waxaana taaladan noqotay mid soo jiidatay dad badan.
Waxaa dhisay Taaladan cajiibka ah Injineero u dhashay dalalka Koonfur Afrika iyo Ingiriiska, waxaana sameynta taaladan ku baxday lacag dhan 15 milyan oo ah lacagta dalka Kazakhsatan .
Qalbi Dhagax oo si qiiro leh u sharxay Qalbi jabkii ku dhacay markii Itoobiya loo dhiigay & Cida u gacan gelisay